Ngolunye usuku ngaphambi umuntu ngamunye omdala nanku umbuzo: kanjani ukuthola ibhizinisi like? Phela, iSilekeleli Sokwazisa kunikeza injabulo yangempela ekuphileni futhi kuletha pay ehloniphekile. Uma wenza kanjalo lokho okuthandayo, khona-ke umsebenzi kulula, kuba nokukhula ngokushesha isitebhisi umsebenzi namakhono ukhula kancane. Thola umsebenzi ukuthi kungenziwa ngokuthi "ibhizinisi lami", futhi noma iyiphi ekuseni iyoba yinhle, nazo zonke izinto eziphila kuyoletha injabulo okuningi.
Kungani kufanele ukhethe into wonke umuntu
Umphakathi uthatha ngakho kwakhiwa ukuthi ilunga ngalinye kumele libambe niche ezithile, ngokuletha umnikelo waso omkhulu abalulekile nentuthuko. Ngokwengxenye enkulu, umbuzo kanjani ukuthola into ngendlela ethandwa nguye, sikhathalela kuphela ngabanye. Abaningi bakhetha ukulandela ukhetha inkambo amelane.
Ukuhamba ngebhayisikili charted omunye umuntu endleleni, umuntu ngeke akwazi ukungakhathazeki ngisho bacabange, kungani isidingo ukugcwala ngokwanele wokuphila, akukho umuzwa wenjabulo ukudlala. ukuphila lethu liqukethe izikhathi eziningi injabulo enezici. Umsebenzi uthatha lema-awa la-40 isonto ngalinye, futhi uma umsebenzi ekhethiwe ingeyona umphefumulo ke ingxenye enkulu umzamo uzoya unqobe kwabantu ukwenqaba ezingenalutho futhi inenzuzo lutho kodwa imali, isikhathi.
Uma ubona ukuthi usenkingeni engifuna ukukusho, "Yebo, yilokho ibhizinisi lami," kanye nomuzwa wokulahlekelwa ngeke. Ngokuphambene, abawujabulela kuzokwenza imizwelo eyakhayo futhi ukwaneliseka emiphumeleni. Khona-ke abakhululiwe lucky ngubani ngokuzethemba athi: "Ngiyakuthanda umsebenzi wami" akusho ukukhononda mayelana okhuphukela ekuseni, imizuzu ezingembalwa ngaphambi kokuphela shift bese ngempelasonto ukuphumula, hhayi bahlushwe umcabango nokhahlo ekuphileni kwansuku zonke. Abantu abanjalo bayajabula nobunye.
Izimpawu ukuthi umuntu waziphatha "hhayi yakhe" Into
umsebenzi engathandwa ungakulimaza ngempela impilo yakho. ukucindezeleka isikhathi eside kuholela izinguquko ezithile hormone, okuyinto yena, nomthelela ekusebenzeni zomzimba womuntu. Nokho, ezinye zezimpawu kungatholakala ngisho nangaphambi kuzoba nezinkinga ezingathi sína.
Engazi ukuthi wayezobathola kanjani ukuthola into ngendlela ethandwa nguye, umuntu uzihlanganisa hhayi lokho afuna, ngokuvamile ngisho uyaziqaphela umsuka wale nkinga. Izimpawu, okungase ukunquma ukuthi umsebenzi asifanele:
okungaphumeli ekwanelisekeni emiphumeleni zomsebenzi - inkokhelo zingajabuli, ngisho noma kuphezulu, wathandwa ithenda akakubangeli injabulo futhi sidumise abaphathi beqonda kunalokho icasukile;
akekho kungenzeka futhi, okubaluleke kakhulu, isifiso ukuthuthukisa emsebenzini eziwukhethile;
awunakuthokoza inqubo umsebenzi, kubonakala sengathi isidina, yisicefe futhi alunamsebenzi;
sebekubeke ungathandi noma iliphi iqembu umsebenzi noma ukuphathwa; Lokhu, yebo uphawu engaqondile, kodwa uma emva ushintsho umsebenzi wonke futhi kwenzeke, cabanga: mhlawumbe yokuthi Kulokhu - hhayi ukuthi ufuna ukunikela sonke impilo yami;
kunomuzwa njalo ukuthi ukupha ngokwengeziwe kunokulindela uthatha; amabhonasi, amaholo, amabhonasi, udumo - konke ibonakala enganele;
umcabango kwalamula ukusa ngoMsombuluko ubuthi ngeSonto ukuphumula kanye namahora okusebenza yokwelula phakade.
Yiqiniso, zonke lezi zici kufanele kubhekwe ku eziyinkimbinkimbi, ungakwazi futhi ukukhathala banal, futhi baphelelwe amandla. Kodwa lapho umsebenzi ekhethiwe call of the inhliziyo, ukukhathala sihamba ngemuva kwamaholidi, futhi inkinga isixazululekile nge nokutubeka sokusebenza kwengqondo. Uma uphendule ngoyebo okungenani isigamu imibuzo, khona-ke isikhathi sokucabanga ukuthi ukukhetha into angayithandi. Futhi, ungase uthande ukushintsha Ububanzi bemisebenzi ukuthola imfundo eyengeziwe noma uzama ukuvula ibhizinisi.
Yini eyenza leli cala ngenxa yomphefumulo
Umuntu ngamunye ubizo, ukuthambekela ezithile kanye nezici ezithile ukuze umsebenzi othize. Uma futhi kokunquma umbuzo "Yini kunendaba nami eshaweni?", Uzothola injabulo bona injongo yabo yangempela.
Wonke umuntu kufanele alwele okuningi okuhle emphakathini. Ngokwenza nje yini ayithandayo nokuzinikezela okugcwele ngokubeka wonke amandla, uzothola umphumela esiphezulu. Omunye othola ubizo bakhe beqiniso, elinde umsebenzi omuhle imbuyiselo ohloniphekile umzamo.
Wazi kanjani ukuthi kunjalo abakhethiwe - intandokazi?
Kwenzeka futhi ukuthi umsebenzi ekhethiwe onjalo afana ngazo, kodwa akazange athole ukunquma ukuthi ukubizwa loluphelele. Kunezindlela eziningana izimpawu ezibonisa ukuthi impendulo yombuzo kanjani ukuthola into ngendlela ethandwa nguye, banikezwe abathembekile:
Umsebenzi akuyona nje umthombo engenayo kodwa futhi kusilethela ukwaneliseka;
kukhona isifiso kanye nethuba self-ukuthuthukiswa kanye nokukhula professional ;
uthola injabulo yangempela kusukela ukusebenza, kwenziwa kujabule phezulu, nesikhuthazo abaphathi bakhe hola futhi limnandi;
njengoMfula kakhulu endaweni yomsebenzi - isakhiwo, ihhovisi, uma sebangena emsebentini; osebenza nabo, abangaphansi futhi abaphathi - konke lokhu, noma iningi, zivuse imizwelo eyakhayo;
unesifiso akhule kulo mkhakha futhi ukua adlulise ukwaziswa yabo kwabanye;
kukhona umuzwa umzamo nokwanela ukuhlolwa.
Uma uphendule ngoyebo nengxenye noma ngaphezulu amaphuzu, thokozani - ibhizinisi ekhethiwe futhi ukubizwa kwenu kweqiniso.
Ukucinga isikhalazo icala
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu akuyona ngokushesha uyazi indawo kwakhe kuleli zwe zokusekela ukuphila futhi abone isidingo sokushintsha okuthile. Uma sikhula, kuya kuba nzima nakakhulu baphenduka futhi bashintshe ukuphila kwabo. Kodwa ungesabi. Futhi 20, no-60 akukephuzi kakhulu ukuba baqale kabusha futhi.
Ukuze anqume ukuthi sesifikile isikhathi ibukeke kunjalo, ngokwanele ukuqonda: umsebenzi wamanje hhayi kuphela engalethi ukwaneliseka, kodwa futhi kudingeka bachithe amandla akho engqondo ukuze zinqobe lo ukumelana. Akubalulekile ukuphila ukulandela ithrekhi washaywa, uma nezinkinga zemizwelo kuphela. Njengoba kuchazwe isidingo sokushintsha, zizwe ukhululekile ukuqhubeka ucinge entsha. Ukucinga isikhalazo ekuqhutshweni kungaba ezithakazelisayo kakhulu futhi umsebenzi elikhiqizayo.
Izinyathelo zokuqala ukushintsha umsebenzi:
uthintane ochwepheshe emikhakheni ehlukahlukene;
thola ezahlukeneyo noma kabusha ukuthola ukwakheka yesibili;
Thola ukuthi ungasetha kanjani futhi bazishaye isifuba ngokuthi ukuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane;
zama ngokuphelele ukushintsha isimo, isibonelo, ukugibela ngoba ngenyanga kule ndawo.
Izinto Ezithiya umsebenzi uyabathanda
Ukuthola ukubizwa kwenu, ungase uhlangane nezithiyo eziningi, kodwa ungadikibali nokushintsha iphupho. Qhubekisa ngokuthwebula ungemi ngaphambi yimuphi obstructions.
Izinto Ezithiya amaphupho ibhizinisi:
izihlobo ukumelana nabazali, bangakwazi kubhekwe icala akhethiwe esingenathemba;
ukungabi nemali yokunakekela ukuphinda uqeqesho;
ukuntuleka kwesikhathi ukhululekile zifunde amasha;
izinkinga ukuqatjha Ukuphrofayela abakhethiwe.
Naphezu kwazo zonke lezo zinkinga, ungadikibali futhi qinani idolo. Yiya umgomo babezazisa, nakuba izinyathelo incane kakhulu, into esemqoka - ukukholelwa ngokwakho.
Lapho kufika isikhathi sokuba "Ngiyakuthanda umsebenzi wami"
Kuzothatha isikhathi esithile, futhi uqiniseka ukuphimisa nkulumo ngale. Injabulo, injabulo ukuphelela kokuphila - yilokho yi esasiwafanele ka ekunqobeni izithiyo. Phuma zone induduzo njalo lithembisa nelwati lolusha oxhumana ewusizo futhi injabulo ukutholakala. Ekuphileni akufanele kube ixhaphozi zibuthuntu - Wena ufanelwe umsebenzi ozithandayo!
Lezi izimpawu zibonisa ukuthi umsebenzi ongayethembi
Lapho egcotshwa ngubani ukusebenza: Chemical Engineering
Lo njiniyela abakhulu imisebenzi yakhe
Zonke shades of blue: Iphalethi futhi inhlanganisela